Warshadda wax soo saarka - Soosaarayaasha Waxsoosaarka Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Qaybaha Sandblaster Qaybaha Nylon ee isku-xidhka degdegga ah ee tuubada sandblasting
Quick Nylon isku xidhashada tubada sandblast haystaha biiyaha tubada mashiinka sandblasting
Waxaa jira 4 cabbir kala duwan sida soo socota:
Q-IM-NY si loo waafajiyo tuubada OD34mm
Q-1-NY si loo waafajiyo tuubada OD39mm
Q-2-NY si loo waafajiyo tuubada OD50mm
Q-3-NY si loo waafajiyo tuubada OD55mm
SB-NY oo leh dun wanaagsan oo ah 45mm
Marka tuubada qaraxa aysan dheereyn, waxaan ku xirmi karnaa labada tuubbo isku xirnaanta degdegga ah.
1. Laba tuubo oo dherer isku mid ah: Soo saar laba isug oo cabbirkoodu isku mid yahay, isku hagaaji bayonetka
dhagsii oo wareeji si aad uhesho, ka dibna ku xir tubbada qallajinta labada dhinacba.
2. Laba tuubbo oo dhererkoodu kala duwan yahay: Soo qaado laba isugeyn oo cabbirkoodu u dhigmo, is waafaji bayonet-ka
ku riix si aad u wareegto, ka dibna ku xir tuubbada cibaada ee labada dhinacba.
3. Wadajirka taangiga sandblasting: Isku xidhka wadajirka gaagaaban si toos ah ugu xir salka hoose ee mashiinka ciida.
Faa'iidooyinka: Hawlgal fudud, isku xirnaan deg deg ah tuubbo ciideed, waxtarka shaqada oo la hagaajiyay dhib yar oo aan loo baahnayn, hagaajin wanaagsan.
Mararka qaarkood: Waxay ku habboon tahay dhisidda maraakiibta, hoos u dhaca shaqooyinka waaweyn, qaab dhismeedka birta, tuurista waaweyn, wasakhahaasi waaweyn, weelasha qashinka lagu farsameeyo ee qalabka wax lagu qodo, iwm.
Koofiyad dillaacaysa ciid oo dhan oo leh tuubada hawada, miiraha neefsashada hawada, jaangooyaha heerkulka
Koofiyad tayo sare leh oo ABS Sandblast ah ayaa koofiyada koofiyadda leh 1m tubbo hawo
Tayada dhexdhexaadka ah Cadaadiska shaqada Wight Cabirka guud
(Hawada is dulfuulan) 4-8kg 0.8kg 38mm * 210mm
Koofiyadan sandblasting waxay isticmaashaa oo keliya xoogga qalabka ABS, hal qaado, iyadoo la raacayo heerarka amniga qaranka,
hubi in jabintu aysan jabin; Hadal haynta daran, waxaa jira bar guduudan iyo jaalle, midabku waa muuqaal qurux badan,
weligiis madoobaanin oo midab doorsooma; Iyada oo jeexitaanka hagaha marinka, ha u sii daayo habsami u socodka hawada hareeraha, guud ahaan xagga hore ee muuqaalka sawirka,
ka saar hawada neefsashada, ka dhig si ka sii cad xariiqda aragtida, si aad si cad uga dhigto qadka aragtida, iska ilaali hawo madaxa madaxa ah, taasoo keenta raaxo-darro;
Madaxa madaxa tuubada gaaska gelida sunta aan sunta lahayn, iska caabin jilicsan oo jilicsan; Aragtida hore, isticmaal ul si aad u xirto, xajmiga soo deynta duminta habboon,
dharka ha iska siibin si toos ah ayaa loogu rogi karaa daaqadda muraayada oo beddel ah; Qoorta waxaa lagu qalabeeyaa shaabad laastik ah, oo si fiican loo shaabadeeyo, shalmada iyo suun,
fududahay in la xidho. Kaliya hal kiilo oo ah wadarta culeyska alaab dhameystiran;
Shayga waxaa loo qaybiyaa: koofiyadaha, koofiyadda xitaa dharka, cabirka koofiyadda, sidoo kale waa la imaan karaa si loo habeeyo.
Badeecadu waxay leedahay cimri dherer, badbaado, ilaalinta deegaanka, raaxo leh, habboon, waxqabadka la xiray waa sugitaan wanaagsan astaamaha.
Badbaadada Sandblast Koofiyadda Ciidda Maaskaro ee Neefka Badbaadada ee ranjiyeynta
Sand-engeeg Protective Waji Maaskaro Hood Cap Anti Boorka Dabays Sandblasting Koofiyad
Loogu talagalay in laga ilaaliyo wejigaaga khataraha boodhka
Tayo sare iyo neefsasho, raaxo leh in la xidho
Waxay kufiican tahay shiidi, ciida, xoqida dareeraha, iwm
Naqshadeynta Hawada: Hubi in aysan wax saameyn ah ku yeelanaynin neefsashada inta lagu jiro saacadaha shaqada ee dheer.
Naqshadeynta laastikada ayaa loo isticmaalaa gudaha si wax ku ool ah looga hortago boodhka iyo boodhka wanaagsan ee soo galaya.
Gacanta oo Lagu Qabto Qarxinta Buufinta Qoriga Qarxa Warbaahinta Xakamaysa, Soodhaha, Kuusha, Walnut, Aluminium oksaydh - Pneumatic
【Sandblaster body Jirka aluminiumku waa mid fudud oo waxtar leh, nooca gacanta lagu hayana waa ku habboon yahay in la isticmaalo.
Qulqulka sandblastka waa la hagaajin karaa oo sandblasting si siman ayaa loo qaybiyaa si loo badbaadiyo maaddada.
【Si Fudud Loo Isticmaalayo】 oo loogu talagalay dhammaan noocyada geesaha birta dhalaalaya iyo kuwa yaryar, rinjiyeynta buufin, geesaha ceeriin,
faahfaahinta daxalaystay; dheriga awooda wax weyn u ah nooc kasta oo ciid ah: corundum madow, carbide silicon, quraarad kuul, iwm.
Waxqabadka Sare ee DHEERAADKA AH】 - Balaster ciid waara oo qarxa walxaha warbaahinta xawaaraha sare ku socda
kaas oo si dhakhso leh uga qaada ranjiga, miridhku, daxalka iyo miisaanka. Isticmaal blaster leh noocyo badan oo warbaahinta qarax ah sida ciid
aluminium oksaydhiska la nadiifiyo, kuul, soodhaha ama qolofka walnut ee fiican iyada oo ku xidhan baahiyaha dalabkaaga mashaariicda.
T DIGNAYN】 Markaad isticmaaleyso sheyga, waa inaad xirataa galoofisyo iyo ilaalin indhaha iyo qalab kale si aad ugu shaqeyso badbaado.
Markaad isticmaaleyso xirmada qoriga, ha ugu jeedin qoriga qof iyo xayawaan.
Adeeg xirfadle ah iibka kadib】 Marwalba waxaan si adag u taaganahay gadaal kasta oo aad iibsato. Haddii sabab kasta ha noqotee aadan ku qanacsanayn 100%
fadlan nala soo socodsii oo kooxdayada adeegga macaamiisha ayaa kaa caawin doonta inaad soo celiso ama lacag soo celiso.
Biyaha nuujin kara mashiinka qarxa ciid culus ee culus 300L
Mashiino Sandblast oo hawadeedu culus tahay
B Burbur ku filan oo furan si loo nadiifiyo qalabka shaqada ee dusha sare leh
Filter Miiraha kala-saarista biyaha ayaa si weyn u wanaajin kara tayada hawo bixinta
Radi Radius-ka shaqeeya waxaa lagu kordhin karaa ilaa 30 mitir
Ku habboon noocyo badan oo ciid ah oo la xoqin karo, ciidda badda, ciidda quartz, macdanta naxaasta ah, ciidda corundum, ciidda birta, iwm
Kaydinta tamarta iyo hawlgalka fudud ee qaybaha ciida. Qaabeynta keydinta tamarta iyo isku dhafka miisaanka fudud
ABS-ka-engeeg boodhka koofiyada difaaca sanduuqa Sandblast
1. Koofiyaddani waxay ka samaysan tahay PC + ABS, oo leh iska caabin riixitaan oo wanaagsan iyo muuqaal muuqaal ah, iyo soo bandhigidda jawi wanaagsan oo loogu talogalay wadayaasha
Lakabka gudaha waa PVClens, lakabka kore waa muraayad adag,
waxay si wax ku ool ah u horumarin kartaa iska caabinta abrasion-ka iyo inay u fidiso aragti ballaadhan hawl wadeennada.
3.Tilmaamaha hawo-socodka hawo-mareenka koofiyada, si buuxda adjustair xoog-xoog leh.iyo qalabaysan anti fogspray,
si wax ku ool ah uga caawiya shaqaalaha inay sare u qaadaan claritya isla markaana ay wax ka beddelaan heerkulka ku jira gudaha koofiyadda.
Waxyaabaha 4.Thishelmetisexportfoundry, waxay la kulmaan heerarka farsamo qaransafety, waxay leeyihiin nolol adeeg dheer iyo saameyn wanaagsan oo ilaalin ah.
5 .It sidoo kale waxay noqon kartaa xirxirida dhexdhexaadka ah iyo soosaarka OEM iyada oo loo eegayo baahida macaamiisha
Pneumatic Sandblast Cabinet Deadman Double Sandblaster Guns Mashiinka Nadiifinta Taangiga oogada Mashiinka 150L-3000L
codsatay in ay miisaanka wax gaar ah, wax processing processing workpiece wax adag, waxqabadka sare qalab sandblasting
waa dusha sare ee qaab dhismeedka birta ka hor nadiifinta ka saarista miridhku, marka lagu daro ranjiga, hoos u dhigida, dusha xoojinta
baabi'inta buuqa gudaha ka jira waa qalabka ugu habboon. Qalabku wuxuu leeyahay awood ballaaran oo lagu raro ciid, qaabeynta qoriga buufin karays weyn
marka la eego xaaladaha hawo ku filan, waa gargaar xoog badan oo xoqida iyo miridhku wuxuu ka saareyaa dadka isticmaala, waxqabadkeeda sandblasting aad u fiican wuxuu ka dhigayaa shaqada dusha sare ee shaqada ee shaqada mid fudud
Radi Radius shaqeynaya waa la kordhin karaa ilaa 30 mitir, iyo heerka daaweynta dusha sare ay noqon karto SA2.5-3
Mashiinka Mashiinka Lagu Qaadan Karo ee La Qaadan Karo oo Taangiga Mobile-ka ah lagu qaadan karo
Shayga: Hawada Sandblaster 10 Galoon oo La Qaadan Karo Sand Blaster Hawada Warbaahinta Mideysa Bileyska Taangiga Waxyaabaha Dhaqaajin kara
Tank Rolling Sandblaster Qalabka Fududeynta Qulqulka Warbaahinta Qulqulka Qalabka Hawada
• Shaqaynta: Hawada la qaadan karo ee loo yaqaan 'Sandblaster Air 10 Gallon Capacity' waxay soo saartaa awood qarax oo aan caadi ahayn si looga saaro miridhka ugu culus
• Ku qalabeysan yahay qori dab-damis, qiyaasta cadaadiska
• Badeecad: Hawada Sandblaster 10 Galo oo La Qaadan Karo Sand Blaster Hawada Warbaahinta Mashiinka Xiiraya Isqarxinta Haamaha Qalabka Dhaqaaqa
Tuubada qaraxaysa ciida
Air Sandblaster Gun Gun engeeg Gun for Sandblasting Golaha Wasiirada for 990L / 1200L Sand engeeg Golaha Wasiirada Sandblaster Qaybo
Ciidda Afuufaysa Qoryaha Sandblaster qoriga
Ku habboonow inta badan qalabka wax qarxa ee dib loo cusboneysiin karo - kuusha dhalada, dhoobada, aluminium oksaydhka, iyo cabbirka qaar ee birta birta ah iyo toogashada Xulo warbaahinta qaraxa ku habboon dalabkaaga.
Qoriga qaraxu wax-qabadka-sare wuxuu siiyaa hawl-qabad raaxo leh hawlwadeenka, wuxuuna u oggolaadaa xakameynta saxda ah ee qaabka qaraxa
Waxay haysaa diyaaradda hawada iyo qarka biiyaha qumman oo isku toosan si loo kordhiyo waxtarka qaraxa loona yareeyo xirashada jirka.
Naqshadeynta bistooladda raaxada leh waxay yareyneysaa daalka wadaha waxayna kordhisaa wax soo saarka inta lagu jiro qarax dheer.